Hetsik’ireo Mpianatra Manohitra Ny Fanadihadiana Ratsy Tantana Ny Fihetraketrahana Ara-nofo Tafahoatra Any Andrefan’i Bengal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2014 18:23 GMT
Manao fihetsiketsehana manohitra ny fihetsik'ireo mpitandro filaminana ireo mpianatra ao Jadavpur, ary mitaky ny fametraham-pialàn'ny lefitry ny “chancelier”. Sary avy tamin'i Reporter#47468. Fizakàmanana Demotix (20/9/2014)
Vavolombelon'ny fitakiana fanovàna kely tao #Hokkolorob ny firenena Indiana ao andrefan'i Bengal, dia ny hetsika ”Let There Be Noise” (Avelao hisy Feo) izany, izay niantomboka tao amin'ny Anjerimanontolon'i Jadavpur ny volana lasa teo ary niparitaka be sahala amin'ny afo manerana ny firenena. Nanomboka nampiasa ny fomba fiteny “Hok Kolorob” ireo olona tsirairay, lohateninà hira ny taona 2006 an'ilay Bangladeshi mpihira, Shayan Chowdhury, no niantombohany (fantatra amin'ny hoe Arnob ihany koa), araka ny tenifototra ao amin'ny Facebook, Twitter, ary ireo media sosialy hafa.
Dikasarin'ireo toerana niavian'ny fampiasàn'ireo mpampiasa Twitter ny tenifototra #hokkolorob avy amin'ny tweetchup.com
Ny 28 Aogositra, nanao habibiana tamin'ny mpianatra vavy ao amin'ny ambaratonga faharoa ao amin'ny Anjerimanontolon'i Jadavpur ireo olona maro nipetraka tao amin'ny trano fandriam-bahiny antsoina hoe Old Boy, ary nidaroka ny namany lehilahy. Nametraka fitoriana tany amin'ny mpitandro ny filaminana ny rain'ilay tovovavy ny 02 Septambra, ary nandefa taratasy tany amin'ny manampahefan'ilay Anjerimanontolo ny 03 Septambra, niteraka fanombohanà fanadihadiana anatiny.
Na izany aza, nitranga ny ahiahy momba ny fanadihadiana sahanin'ny sekoly, taorian'ny fitsidihana tany an-tranon'ny niharan-doza tany Bidhannagar ny 05 Septambra teo, nataon'ireo olona roa solontenan'ny mpikambana avy amin'ny mpanadihadin'ny Anjerimanontolo izay nandà ny hanome ny anarany. Nametraka fanontaniana moa ireo mpanao fanadihadiana tsy fantatra anarana, ny fahatsiarovan-tena tsaran'ilay tovovavy ary ny akanjo nanaovany iny alin'ny herisetra iny, ka nitarika ireo fianakaviana nametraka fitarainana tany amin'ny mpitandro filaminana, namaritra azy io ho “fanaovana ramatahora ara-tsaina“.
Tamin'izany fotoana izany ireo mpianatra no nanomboka nanao hetsi-panoherana, nitaky ny fanoloana ireo mpikambana ao anatin'ny mpanadihadin'ny Anjerimanontolo izay nitsidika ny tranon'ilay niharan-doza ary nametraka izany fanontaniana izany, ary namoronan'ny sekoly kaomity vaovao, ivelan'ny sekoly, mba hanao fanadihadiana izay nitranga ny 28 Aogositra.
Ny alin'ny 16 Septambra, nihodidina ireo tranoben'ny Anjerimanontolo sasantsasany ireo mpianatra, nitàna ireo mpiasam-panjakana maro tao amin'ny biraony, tao anatin'izany ny lefitry ny “chancelier”, Abhijit Chakrabarti. Rehefa tsy nahomby ny fifampiresahana tamin'ireo mpianatra sy ireo mpandraharaha, niantso ny mpitandro filaminana ny lefitry ny “chancelier”. Ny maraina be ny 17 Septambra, nirotsaka tamin'ny fihetsiketsehan'ireo mpianatra ny mpitandro filaminana, nandratra mafy olona maro ary nisambotra enina amby telopolo. Maro ireo naiditra hopitaly. Misy ankehitriny ireo resaka hoe nanampy ireo mpitandro filaminana ihany koa ireo mpikatroka mafana fo sasany avy amin'ny Trinamool Chhatra Parishad (ireo mpianatra avy amin'ny antokon'ny mpitondra ankehitriny).
Mikarakara fidinana an-dalambe avy any Nandan ho any Raj Bhavan ireo mpianatry ny Anjerimanontolon'i Jadavpur, manohitra ilay hetsiky ny mpitandro filaminana tamin'ilay sasak'alina tao amin'ny faritry ny fianarana tao Jadavpur. Mangataka ny fametraham-pialàn'ny lefitry ny “chancelier”, Abijit Chakraborty, ihany koa izy ireo. Sary avy tamin'ny Reporter#47468. Fizakàmanana Demotix (20/9/2014)
Niporitsaka tety amin'ny Aterineto ny lahatsarin'ilay fanafihana ireo mpianatra, ary nanamafy ilay tantara ihany koa ireo mpilaza vaovao an-tsary. Nahatonga ny hetsika nasionaly ilay zava-nitranga, satria sahala ny rivo-mahery no nakàn'ny tenifototra #HokKolorob ny media sosialy tao an-toerana.
Nampihetsika ireo olona efa nandalo fahiny tao amin'ny Anjerimanontolon'i Jadavpur manerana ny faritra ny fihanak'ilay hetsika amin'ny Aterineto sy ny fahombiazan'ireo mpanao fihetsiketsehana ao amin'ny media sosialy. Nanao hetsika tampoka sy nahomby ireo mpianatra avy amin'ireo toeram-pianarana hafa sy ireo solontenan'ny vahoaka mba hanehoan'izy ireo ny tsy fankasitrahany tanteraka ny fomba nitantànan'ireo manampahefana ilay tranga-nà fanaovana habibiana.
Ny 20 Septambra, nikarakara fihaonambe tao afovoan-tanànan'i Kolkata ireo mpianatra, nahazo mpandray anjara vinavinaina ho niisa 100.000. Nandefa sary mikasika ilay hetsika tao amin'ny bilaoginy i Prasun.
Nihira ho fanohanana ilay hetsika i Rupam Islam, mpihira gadona mavesatra (rock) ao Kolkata, nanome ilay hetsika ny lasa hira fanevany. Mampiseho ny fahavononan'ilay hetsika amin'ny alàlan'ny teny ilay hira, “Andoloner Shuru Aacchey, Shesh Nei” (Nanana fanombohany ito hetsika ito, fa tsy manana fiafaràny).
Nifamory nanao hetsika ho firaisan-kina niaraka tamin'ilay hetsika #hokkolorob ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana tao Delhi (ao JNU, Banga Bhavan ary Jantar Mantar), ao IIT Chennai, IIT Mumbai ary IIT Kharagpur, Pondicherry, Hyderabad, ary any Bangalore.
Lasa nivadika zavatra hafa mahasarika mihitsy ilay hetsika, raha ny 22 Septambra, nisy famoriam-bahoaka nokarakarain'ny antokon'ny Kaongresy Trinamool izay eo amin'ny fitondrana, hanoherana ireo mpianatra manao fihetsiketsehana, izay nanadrohadroana azy ireo tamin'ny teny faneva sy sary.
Manoratra i Julia Banerjee hoe:
Manoratra ity aho amin'ny maha-mpianatra ao Jadavpur ahy, izay nahita ireo namany nizaka zavatra tsy hay lazaina, izay tsy afaka hody tsy hahita izay hitany, izay toerana an-dalovan'ireo olona tiany sy karakarainy ny fiainan'ny helo eo amin'ny toerana izay tiany amin'ny fony manontolo, ny kolejiny, ny anjerimanontolony.
I Shuddhabrata Sengupta ao amin'ny Kafilla.org dia manoratra hoe:
Nahoana ireo mpianatra ao Jadavpur, sy ireo namany any an-kafa, no tezitra fatratra? [..]
Raha tian'ilay lefitry ny “chancelier” sy ireo manam-pahefana ao amin'ny anjerimanontolo, afaka namaha nalaky ilay olana tanaty fahatoniana, fijerena ny fihetseham-pon'ny hafa ary tamin'ny faharanitan-tsaina izy ireo. Fa naleon'izy ireo nanandrana niaro ny fanjakan- jiolahy ankehitriny izay tarihany ao amin'ny faritry ny toeram-pianarana ao amin'ny anjerimanontolon'i Jadavpur, mba hampifaliana ireo lehibeny ara-politika ao amin'ny antokon'ny Kaongresy Trinamool. Ny lefitry ny chancelier, fa tsy ireo mpianatra, no mila mahafantatra ny dikan'ny hoe ‘fahaiza-miaina’ sy ‘fifampifehezana’ ao amin'ny anjerimanontolo.
Mieritreritra anefa i Agnivo Niyogi, mpitoraka bilaogy iray, fa mihoatra lavitra ny “tenifototry ny fikatrohana” ilay fanentanana #hokkolorob:
Ny tena mampihomehy ahy indrindra dia ny nandefasan'ireo mpianatra “mpitroatra” ireo “mivantana” tamin'ny FB sy Twitter ny “herisetra tohanan'ny fitondrana”. Nitsambikina tao anatin'izany rehetra izany ihany koa ary nanao fanenjehana ny Governemanta WB ireo media ao Delhi, izay nanao ireo lahatsoratra tao amin'ny FB ho toy ny fahamarinan'ny Evanjely, tato anatin'ny andro maromaro izay.
Manana mpanjohy mihoatra ny 54.000 isa androany, ilay pejy Facebook natokana ho an'ilay hetsika #hokkolorob, izay nandray anjara lehibe tokoa tao anatin'ilay hetsika. Nisarika ny sain'ny polisy hanao fanadihadiana ihany koa ny lazan'ilay vondrona, hatramin'ilay niharan'ny habibiana tao jadavpur ihany koa. Araka ireo tatitra, nametraka fitarainana tany amin'ny mpitandro filaminana tao Lalbazar ilay tovovavy, ny volana lasa teo, hanenjehana ny ezaka atao ao amin'ny Facebook mba “hanimbàna ny anarany”. Tsy nangataka ny fametraham-pialan'ny lefitry ny chancelier, Chakrabarti, intsony ihany koa moa ny rain'ilay niharan-doza, ary manainga ireo mpianatra aza mba “hiverina any an-dakilasy”.
Manoratra i Avishek hoe : Ho lasa hetsika very maina fotsiny ve izany ny #hokkolorob?
Sahala ny ho betsaka ny zavatra tokony hatrehina. Mijanona ho tsy misy valiny ny antony tena mahatonga ireo mpitandro filaminana ho afa-maina fotsiny tamin'ny fiantsapazany feno herisetra tamin'ireo mpianatra sy nisintontsintona ankizivavy, raha voatazona kosa ireo ao amin'ny #HokKolorob noho ny fandokoana lambabe .
Miasa saina amin'izany angamba i Kolkata. Mety tsy miasa saina amin'izany izy, na dia vavolombelona nahita maso ny taona 1905, 1946, ary 1971 aza. Manohy hatrany ny fiolankolanan'i Laboni ka hatrany Maddox Square izy ary hatrany ankoatra any. Nitomany nandoatra ny fony izy, ny andro nirosoan'ny #HokKolorob ho eny anoloan'ny sehatra, ny 20 Septambra.
Indray andro any, hanjohy ny hetsika izy mba handresy ihany koa. Indray andro any, hamaly ny #HokKolorob izy.